SIDA LOO ABUURO OO U KORO JANJEERADA DACHA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Bellflower (qaadka Campanula) waa caleemaha dhirta ugu caansan ee reerka Bellflower.
Qoyska waxaa ku jira in ka badan afar boqol oo nooc oo soo kordhaya waddamada leh cimilada kulul.
Qayliyaha ayaa ku kaca Caucasus, Siberia, Aasiya, Yurub, iyo sidoo kale Waqooyiga Ameerika. Inta badan qaababka dabiiciga ah ee guusha weyn waxaa ku kordhay dadka beeraha, maadaama ay tahay qurxiyo, jiilaal-adag iyo adigoon hoos u dhigin daryeelka.
Noocyada beerta ee dawanno, oo loo sameeyay xulasho, waxay leeyihiin inflorescences countless iyo spectrum midabo ballaaran. Si kastaba ha noqotee, way adagtahay in la daryeelo, maxaa yeelay waxay sameeyaan sheegashooyin dheeraad ah oo ku saabsan xaaladaha ay koraan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan fiiro gaar ah u laheyn awoodda yaryar, inta badan dukaamada waxaa suurtogal ah in la helo dhirro ku haboon goobaha cimilada iyo cimilada.
Duullooyinka aan tiriska lahayn ayaa loo qaybiyaa kooxo iyadoo loo eegayo sifooyin kala duwan. Iyada oo rajo-nololeedka - marinnada dabbaaldegga ah iyo biennial, iyo sidoo kale tiro noocyo ah ayaa loo tixgeliyaa sannadlaha.
Tan iyo markii ay jiraan in ka badan 300 nooc oo ah warshadkan adduunka, u qeybi saddex kooxood oo waaweyn oo kala hadal habitat, sida kaynta, cawska iyo guntada buuraha.
Ma taqaanaa? In England, waxaa jira aaminaad ah in dawanno ayaa lagu xiray laabta by rafcaan, oo sidaas daraaddeed waxay u keenaan barwaaqo ah guriga. Sidaa darteed, ubaxa waxaa loo tixgeliyaa muqadas.
Dukaamada xayawaanku waxay ku koraan geedaha hoostooda, laakiin waxaa jira amarro weyn oo ka mid ah, iyaga oo ka duwan kuwa qorraxda jecel. Mulkiilayaasha goobaha kaynta, oo doonaya in ay degaan dhulkooda, waxay si ammaan ah u dooran karaan noocyadan gambaleelka.
Noocyada xayawaan ee shimbiraha ah iyo kuwa hoosta leh ayaa waxaa ka mid ah:
Galka maro-qabadku waa lover a hoos u, wuxuu gaadhay height 1 m. Magaca la siiyay sida waafaqsan qaabka caleemaha. Ubaxyada noocyadaas waa kuwo waaweyn, shirokopolokolchatye, racemes iyo gaadho 4 cm dhexroor.
Waxa kale oo jira noocyo leh qaab muuqaal oo ubax ah. Waqtiga ubaxa waxaa lagu qeexi karaa Juun-Juulaay.
Jilbaha Broadleaf - si la mid ah sida maro-baxa-caleen, hooska-jecel yahay. At dhererka qiyaastii 1.5 m Waxa uu leeyahay caleen toosan, iyo sidoo kale ubax kaliya oo leh caleemaha asalka ah ee ku jira bannaanka. Badanaa waa caddaan ama madow. Ugu sarreysiga ubaxu wuxuu dhacaa bisha July.
Kalluunka jardiinka ayaa ah jacaylka qorraxda, laakiin sidoo kale u dulqaadanaya. Maadada dhererka dhererka 1 mitir. Haddii aan ka hadalno nooca dabaqyada, markaa noocyada noocan ah waxaa lagu kala soocaa noocyo kala duwan oo beerta. Caadi ahaan kuwani waa ubaxyo midab buluug ah oo leh jimicsi. Wakhtiga ubaxu wuxuu ka bilaabmaa Juun ilaa da'da hore.
Kanu waa dad badan - sida lafaha jilibka, shaaha-dulqaad iyo aan qabyo ahayn. Heerkuna wuxuu ku kala duwanaan karaa 0.8m. Ubaxku badanaa waa mid buluug ah oo ku yaala inflorescences weyn ee qaabka guud. Wakhtiga ubaxu waa dhammaan xagaaga. Noocyada beerta ee warshadani waxay ku kala duwan yihiin laba ubax.
Waxaa jira noocyo qoyan oo badan oo u baahan goobo leh qorraxda tooska ah, oo u dhiganta muuqaalka dabiiciga ah. Crimean iyo dhexdhexaadiyaha ugu xiisaha badan.
Qalinka Crimean - taxamarka oo kordha kaliya ee Crimean ah. Dhererka wuxuu ka gaari karaa 15 cm illaa 50 cm.waxay leedahay mid toosan, qaro weyn oo ubax ah iyo ubaxyo lilac ah oo koraya oo cagaar ah.
Qolku waa celcelis - mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee qoyskan. Barxadda Pyramidal wax ka yar 1 mitir ee dhererka. Muuqaalka ugu caansan waa ubaxyo casaan ah. Waxaa loo tixgeliyaa noocyo kala duwan oo loo yaqaan "Copper and Saucer", ubaxa kuwaas oo lala xiriirinayo labada shaah.
Dukaamada buurta ah waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu caansan qoyska, sababtoo ah dhaqannada noocan oo kale ah sida jardiinooyinka buuraha, beeraha dhagaxa leh iyo dhagaxyada ayaa muddo dheer caan ku ahaa. Caadi ahaan ubaxyada waxay ku koraan cagta cagta ee hareeraha Alpine ama qulqulka dhaadheer.
Noocyadaas waxaa loo kala qaybin karaa dhagax iyo cagaar. Noocyada ugu qurxinta badan waa: Kanal Scheuchzer, buunshaha waa tirsovidny, buunku waa bjørk, iyo buunku waa gargansky.
Qolalka Sheichzer ayaa inta badan ku koraa dhulalka alpine. Waa jeexan rhizomatous ah, afkoda ah ee kor u kaca oo gaaro height ah 30 cm Mid ka mid ah ama dhowr ubax leeyihiin midab lilac iftiin. Waxay caadi ahaan ku dhacdaa dhammaan xagaaga.
Dukaanka Bluebell - biennial berries, ilaa 50 cm sare. Waxay leedahay stem thickened iyo toosan. Caleemuhu waxay sameeyaan roseyn, inta badan si ballaadhan oo toosan iyo hoos. Ubaxyada iyo jaalaha ah waxay sameeyaan inflorescence cirridka cufan. Ubaxku wuxuu dhacaa bartamaha xagaaga.
Galka bjørkeled wuxuu ku koraa dildilaaca dhagaxyada, wuxuuna gaaraa dhererka illaa 15 cm Caleemaha ubaxu waxay leeyihiin midab guduudan, iyo ubaxyada horeyba u muuqday inay baraf-caddaan ah ku dhacaan. Ubaxku wuxuu dhacaa dhammaadka May waxana uu socdaa wax ka badan hal bil.
Gargan-gala waa dhagax weyn waxaana lagu kori karaa mugdiga. Jardigu wuxuu samaysmaa duur sare oo dhererkiisu yahay 15 cm. Ubaxyo buluug ah oo buluug ah oo qaab muuqaal ah ayaa muujinaya kaliya bilowga xagaaga.
Ma taqaanaa? Dad badan oo aaminsan dadyowga kala duwan ee la xidhiidha midabadaas. Sida laga soo xigtay mid ka mid ah, buunshaha waxaa la maqli karaa hal mar sanadkiiba, oo ah habeenkii jilicsan ee ku saabsan arinta Ivan Kupala, ka dibna ku farxi ubaxyada xagaaga oo dhan.
Noocyadaasi way kala duwan yihiin, wayna kala duwan yihiin. Waa inay degaan boggaaga.
Sida loo koriyo faraska boggaaga
Noocyada warshadaha ornamental ah ee aad u caan ah ee beerista, koritaanka, daryeesha iyo beeritaanka bluebells ma keeno dhibaatooyin aad u ballaaran, maaddaama dalaggu uu badanaa aan qabyo ahayn isla markaana la qabsan kara xaalado kala duwan oo jiritaan.
Si kastaba ha noqotee, ilaalinta foomka qurxinta inta lagu jiro xilliga sii kordhaya iyo xajmiga burooyinkooda, ubaxyada muddada dheer iyo sii socoshada koritaanka ayaa suurtagal ah oo keliya abuuritaanka ugu wanaagsan ee shuruudaha noocan oo kale ah taas oo dhammaan sifooyinka tiknoolojiga beeraha noocyada kala duwan loo tixgelinayo.
Waraabinta iyo ciidda bacriminta
Dhirta badan ee dhirta waxay door bidaan meelaha bannaan oo iftiiminaya, laakiin qaar ka soo baxa suunka kaynta, waxay horumariyaan haddii ay ku jiraan hooska. Xitaa noocyada iftiin-jecel ee qabriga ku dhajiya hooska qayb ahaan si fiican, iyo sidoo kale u koraan si ka fiican in xaaladaha sida ka badan in qorraxdu si buuxda u furan.
Waa muhiim! Dawannadu ma jecla haddii biyuhu isku ururaan ciidda. Si kastaba ha ahaatee, way dhiman karaan.
Tusaale ahaan Campanula campanula (Campánula) waa sonkor, laakiin haddii ay tahay mid kulul oo qalalan, waxay u baahan tahay in si joogto ah loo waraabiyo. Noocyada dabiiciga ah ee geedkaan waxaa si gaar ah u saameeya la'aanta qoyaan.
Sida bacriminta, badiyeyaasha badankood uma baahna quudinta, laakiin weli waa la jecelyahay ugu yaraan hal mar guga, xitaa ka hor soo bixitaanka caleemaha, ku dar bacriminta yar oo leh xubno raad.
Bacriminta noocan oo kale ah waxaa laga iibsan karaa dukaanka beerta ama dukaanka. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la siiyo fiiro gaar ah.
Nitrogar waa in ay ahaataa boqolkiiba ballaaran ee wadarta guud ee fosfooraska iyo potassium. Waxaad ka heli kartaa wax ku saabsan xirmada.
Beeraha iyo dhirta
Daryeelka noocaas ah ee nabarrada sida mulching waa in la sameeyaa ka dib markii si toos ah loo beerto warshad leh lakabka ku saabsan 5 cm. Sidoo kale, nidaamka waxaa lagu fuliyaa dayrta si looga hortago fadhiisin.
Si aad u kiciso xoojinta ubax, ubaxyada ay ubax yihiin ayaa laga saaraa. Lama oggola in lakab kale oo lagu dahaadho.
Cagaarka waxaa lagu sameeyaa dhowr marxaladood:
Boogaha u muuqda sariiraha ubaxa, ku dhufo abuurka. Ka saar haramahaas u baahan yahay illaa iyo xilliga uu abuurku bilaabmayo. Caleenta mustaqbalka way sii yaraanaysaa.
Markaad isticmaasho qalabka, xidhiidh dhow ee dhirta waa in laga fogaadaa, maadaama ay hoe ku geli karaan qoto dheer oo ku filan ciidda waxayna burburiyaan xididdada marinka beerta.
Weedhidda waxaa lagu fuliyaa cimilada qallalan, sababtoo ah kiiskan ayaa cawsku si dhaqso ah u engegay. Xilliga hawada qoyan, cawska la gooyey waxay noqon kartaa ilaha soo noqnoqda ee muuqaalka cudurrada dhirta kala duwan iyo cayayaanka.
Jeexista gooyuhu waa suurad wacan xilliga dayrta.
Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo wareejinta muuska gacanta ee dayrta ama guga. Guga hore, ka dib barafka dhalaalaya, waxaad si ammaan ah u beddeli kartaa garaac, kaas oo leh nidaam xidid awood leh.
Marka ay dhacdo in nidaamka shidaalku leeyahay nidaam xidid aan qallafsaneyn, waxaa wanaagsan in la beero dhirta marka ciidda ay kor u kacdo, oo ah bisha May. Xilliga dayrta, gambalehu wuxuu u fiicanyahay inuu dib u soo celiyo horraantii Sebtembar, si uu warshadu u qaato xidid ka hor bilawga barafka.
Weydii sida loo abuuro dawanno leh nidaam xidid oo cufan, bannaanka u bixiyaan jawaabta in ay ugu fiican tahay in la beero (tallaal) dhirta inta lagu jiro ubax ama xilli kasta oo kale sii kordhaya.
Xaydhuhu waxay u baahan yihiin in lagu beeray qoryo yar yar oo dhul leh, si aanay u dhaawacin nidaamka xididka geedka.
Waa muhiim! Caleemaha aad rabto inaad kuur gasho waa in si fiican loo waraabiyaa, haddii kale dhirta way dhiman kartaa!
Hawlqabadka beerta, farsamooyin badan oo farsamooyin ah ayaa la ogyahay in loo isticmaalo in lagu tarmaan qoysaska bluebells. Waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso qaar ka mid ah sifooyinka, kadibna waxaa laguu balan qaadayaa guusha.
Waa in maskaxda lagu hayaa in duqsiyada badankood ay ku koraan buuraha. Way ku adag tahay in lagu beero berriga, sidaas darteed, taranka iyo taranka waa suurtagal oo keliya xaaladaha adag. Tusaale ahaan waa Campanella.
Daabacaadda maqalka ayaa la samayn karaa iyadoo loo qaybinayo baadiyaha, abuurka, gooynta. Isla mar ahaantaana, korriinka ka soo baxaya miraha waxaa loo tixgeliyaa qaabka ugu caansan.
Noocka dhalmada ayaa ku xiran arrimo kala duwan iyo qaababka noolaha ee warshadda, qaabka nolosha. Tusaale ahaan, sanadlaha ayaa soo saara oo kaliya by abuur, iyo dyuletki - iyo abuur, iyo gooyn.
In dhalmada abuur, ururinta ee midhaha bluebells bilaabmaa marka ay soo noqdaan brown, iyo ilaa daloolada furan. Ka dib markii hababka lagu qalajiyo miraha miro waa in lagu shubo daloolada furan.
Abuurka marinka ayaa aad u yaryahay, sidaa darteed waxaa lagu qasbi karaa jilcis, kaas oo horey u tirtiray jajab yar, ama ciid la dhaqay. Abuurka miraha waa in la beeray si toos ah dhulka ama horay si ay u koraan geedo si ay u beertaan beerta ubaxa leh imaanshahooda maalmaha diiran.
Noocyo badan ayaa ku gooya gooynta. Laga soo bilaabo February ilaa May, gooyn waa la gooyaa iyo saddex gooynta kasta oo la beeray. Sameynta xididdada maqalka ayaa suurtagal ah 21 cisho gudahood. Kala saaridda gooynta la soo saaro guga.
Si loo helo aasaas wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo unugta buufinta.
Isticmaalka filimka ayaa loo tixgeliyaa inay tahay isku mid qasab ah si loo abuuro qoyaan badan, maadaama daboolayaashu ay aad u doonayaan tilmaamayaasha qoyaanka inta lagu jiro koritaanka.
Waa in la xusuusnaado in filimku uusan ku dhicin geedka. Habkani wuxuu ka mid yahay kanal-jilayaasha taranka.
Markaad isticmaasho habka loo kala qaybiyo baadiyaha, gambaleelka ayaa marka hore la qoday, ka dibna waa la jarayaa caleemaha kor ku xusan iyo gooyaa delenki leh mindi / isha. Delenka waa inuu leeyahay xididdada iyo burooyinkeeda cusboonaysiinta, ka dibna waa in lagu beeray jeexdin si ay burooyinkoodu yihiin heer dhulka ah.
Codsiga iyo sifooyinka faa'iidooyinka leh ee kanalka
Asal ahaan, markasta waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin madaxeed. Waxa kale oo ay leedahay tiro ka mid ah guryaha daawooyinka: anti-bararka, antimicrobial, sedative, suuxdinta.
Dawannadu waxay kaloo heleen isticmaalka daaweynta cudurrada qaarkood, sida qufaca, madax xanuun, qandho, dhiigbax, dhiig caadada.
Ma taqaanaa? Garaarku wuxuu caawin doonaa bogsashada nabarrada marka eeygu qaniinaan, haddii aad ka sameysid poultice of it.
Garaarku waa daaweyn aad u fiican lichen. Dumarku waxay sidoo kale xakameyn karaan xinjirowga iyo xanuunka caadada. Haddii aad haysato ilmo daciif ah oo gurigaaga ka mid ah, kadibna waxaa la siin doonaa xoog lagu siinayo decoction qaylo-ubax lagu daro qubeyska.
Waa muhiim! Ha isticmaalin gambale haddii aad qabtid iska horimaad ama isdifaacid. Sidoo kale, laguma talinayo in lagu isticmaalo alaabta dawooyinka loogu talagalay haweenka uurka leh iyo carruurta ilaa 6 sano. Ka hor intaadan isticmaalin jilibka ujeeddooyin daaweyn, waa inaad la tashataa takhtarkaaga.
Ujeedooyinka daawooyinka, miraha iyo xididdada gambaleelka waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo decoction, tincture ama budada.
Siyaabaha loo xakamaynayo gambaleelaha cayayaanka
Guud ahaan, noocan oo kale ah warshadda waa mid aad u yar u nugul cudurada ama cayayaanka. Cayayaanka ugu weyn ee bluebells waa slug in cuno ubax iyo caleemo.
Si aad wax uga qabato waa adag tahay. Qalabaynta farsamooyinka, oo ay ka mid yihiin falcelinta oo dhan, saarista haramaha, waxaad ka hortagi kartaa dhacdadeeda.
Waxa kale oo aad soo jiidan kartaa kalkaaliyeyaasha beerta dabiiciga ah: qoob-ka-soo-baxyada, caleenta ama qashinka. Walxaha kiimikada waxay isticmaali karaan metaldehyde.
Sidoo kale, dadka jecel waxay cunaan dawannada jiirka, iyo xididdada geedka waxay ku raaxaystaan ​​dhirta. Haddii aad rabto inaad ku adkaato nolosha cayayaanka, waxaad u baahan tahay inaad si qoto dheer u daboosho ciidda inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Tani waxay si weyn u burburin doontaa dhaqdhaqaaqa xayawaanka waxayna ku adkeyneysaa in ay soo gasho cunto, burburiso ukunta iyo dirxiga.
Waa muhiim! Haddii aad isticmaasho doodwanaag si aad u quudiso dhirta, waxay soo jiidan kartaa curyaan.